ब्रह्मा कमल - एक दुर्लभ, पौराणिक वनस्पति - कृषि पत्रिका
चाखलाग्दो तथ्य: यसको पातहरू एक अर्कामा संलग्न हुन्छन् र तपाईंलाई थाहा छ? केवल एउटा पात माटोमा राख्नुहोस् र तपाईं यसबाट नयाँ बोट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ! वाह, यो अचम्मको छ। ब्रह्मा कमलको वैज्ञानिक नाम Saussurea obvallata हो। यो एस्टेरासी परिवारमा फूल फुल्ने बोटको प्रजाति हो। यो हिमालय, हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड, भारत, मंगोलियाई, उत्तरी बर्मा र दक्षिण पश्चिम चीनको मूल निवासी हो। हिमालयमा, यो ४५०० मिटरको उचाईमा भेटिन्छ। यो उत्तराखण्डको राज्य फूल हो। यो बारहमासी बढेर ०.३मिटर (१ फिट) हुन्छ। फूलहरू हर्माफ्रोडाइट हुन् (दुबै पुरुष र महिला अंगहरू हुन्छन्) र कीराद्वारा परागकण हुन्छन्। सम्भवत: जुलाई र सेप्टेम्बरको बीचमा कतै, एक बर्षमा एक रातको लागि फुलहरू फुलछन्। फूलको टाउको बैजनी,फनेल आकारको, सेता फूलहरू २८ सेमी लामो हुन्छ। फूल सूर्योदय पछि फूल्न थाल्छ र लगभग खण्डमा दुई घण्टा लाग्छ ।
फुल लगभग ८ इन्च व्यास हुन्छ र रातभरि खुला रहन्छ। फूलहरू अक्टुबरको मध्यसम्म देख्न सकिन्छ, जुन पछि बिरूवा मर्छ, अप्रिलमा फेरि देख्न सकिन्छ। ब्रह्मा कमल, ब्रह्माको नाममा, सृष्टिका परमेश्वरको नाममा चिनिन्छ। यसलाई सामान्य रूपमा रातको रानी, ​​रातको लेडी,सुन्दर कमलको रूपमा लिइन्छ र यसलाई पवित्र बोटको रूपमा व्यवहार गरिन्छ। यो अर्किड क्याक्टसको रूपमा पनि लोकप्रिय छ किनकि फूलको सुन्दरता अर्किड जस्तै छ र बोट बिरुवामा क्याक्टसको जस्तै काँडा देखिन्छ। हिमालयमा फेला परेको ब्रह्मा कमल बोट बिरुवासँग मिसाइन्छ जुन घरहरूमा window सिलमा बढेको देखिन्छ।
भगवान ब्रह्माको फूलको रूपमा पनि मान्यता प्राप्त ,यसलाई धेरै भाग्यशाली ठानिन्छ यदि तपाईंले यो फक्रिएको देख्नुभयो भने। यो फुलले राम्रो भाग्य र समृद्धिको एक भार ल्याउने विश्वास गरिन्छ। ब्रह्मा कमल एक औषधी जडीबुटी हो। यसको तीतो स्वाद हुन्छ। यसको सम्पूर्ण बोट प्रयोगमा आउँछ। यो urogenital विकारहरुको उपचार को लागी प्रयोग गरिन्छ। रोपण र हेरचाह: यसलाई उज्ज्वल घमाइलो स्थानमा राख्नुपर्छ। पातहरूमा पानी पार्नुहुदैन, केवल माटोमा पानी दिनुपर्दछ।जरा सड्न सक्ने हुँदा धेरै पानी हाल्नुहुदैन। बोटमा बिहान ८ देखि १० बजेको बीचमा पानी हाल्नुपर्छ। ब्रह्मा कमल क्याक्टसको एक प्रकार हो, यसलाई धेरै पानी चाहिदैन। दुईदेखि तीन दिनमा एकचोटि पानी हाल्नुपर्दछ र अँध्यारो कोठामा राख्नुहुँदैन। बोटलाई पुन: पटिङ वा प्रचार गर्दा जरा गडबड नहोस् भनेर विचार पुयाउर्नु पर्छ।
ब्रह्मा कमल केयर:
यो असामान्य क्याक्टस वसन्त ऋतुको शुरुवातमा कटिङ्ग गर्दा सजिलो हुन्छ। निम्न अनुपातहरूको साथ पुन: भाँडो: माटोको ३ भाग ,बालुवाको १ भाग, कम्पोष्टको १/२ भाग। ब्रह्मा कमललाई सूर्यको प्रकाश पूर्ण रुपमा चाहिन्छ। माटोको तापक्रम २० देखि ३५ डि.से र जैविक मल हाल्नु नै उपयुक्त मानिन्छ।